Ndi aluminom foil nwere ike ikpo oku na ngwa ndakwa nri? | Jiahua
Ndi aluminom foil nwere ike ikpo oku na ngwa ndakwa nri?
Ee, nsogbu adịghị.
Gbaa mbọ hụ na akpa ahụ mepere,
gbochie ikpo ọkụ na-agbasa na nkwekọrịta oyi na-akpata mgbawa, anaghị eji ihe ndị nkịtị dị ka arịa dị na oven microwave, ọ ka mma iji ngwugwu na-eguzogide okpomọkụ.
1, zere ịme ihe nkiri plastik na nri: mgbe ị na-eji ihe nkiri ọhụrụ, na usoro kpo oku, ọ kacha mma ịghara ịme nri na nri, enwere ike itinye nri n'ime ala nnukwu efere, jiri ihe nkiri plastik mechie ọnụ. nke nnukwu efere ma ọ bụ na-enweghị ihe nkiri plastik kpuchiri ya na iko ma ọ bụ poselin, ka e wee nwee ike imechi vepo mmiri, nke mere na kpo oku ngwa ngwa ma dịkwa mma. Tupu iwepu nri, kpopu ihe mkpuchi plastik iji gbochie ya ịrapara na nri.
2, zere iji ihe emechi emechi: a ga - eji kpo oku mmiri mmiri mee ihe na nnukwu ọnụ, n'ihi na ọkụ a na - enweta site na nri nri na igbe mechiri emechi adịghị mfe izipu, nke mere na nrụgide dị n'ime akpa ahụ dị oke, dị mfe Iji mee ka ihe gbawara agbawa na mberede. Ọbụna na frying na nri nri, chọọkwa iji agịga ma ọ bụ chopstịp tupu oge eruo ihe nkiri ihe nkiri ahụ, ka ọ ghara ime mgbe ikpo ọkụ gbawara, na-agbapụta ọkụ ọkụ na-adịghị ọcha.
3, zere iji arịa arịa: n'ihi na etinye n'ime ọkụ nke ígwè, aluminom, igwe anaghị agba nchara, enamel na arịa ndị ọzọ, igwe onyonyo na kpo oku ga-emepụta ọkụ eletrik ma gosipụta microwave, ha abụọ na-emebi ahụ ọkụ ma ghara esi nri nri.
4, zere ikpa plastik a na-etinyekarị na oven oven microwave: otu bụ nri na-ekpo ọkụ ga-eme ka akpa ahụ gbanwee, nke ọzọ bụ plastik nkịtị ga-ahapụ ihe ndị na-egbu egbu, mmetọ nri, na-emerụ ahụ ike mmadụ.